कोटेश्वरतर्फबाट ओर्लिनुपर्ने विमान किन लाग्यो पशुपति ? – Nepal
बिहिवार, जनवरी 17, 2019
वर्गहरु वर्ग छान्नुहोस अर्थ (20) खेलकुद (4) गृहपृष्ठ (75) ग्लोबल (14) जीवनशैली (4) मनोरञ्जन (8) राजनीति (11) समसामयिक (4) साहित्य (1)
‘आत्तिएका’ मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको ढाडस !!
देउवा सरकारले भूकम्पपीडित र वृद्धभत्ता’bout गरेका निर्णय विवादमा !!
कोटेश्वरतर्फबाट ओर्लिनुपर्ने विमान किन लाग्यो पशुपति ?
मार्च 12, 2018 मार्च 12, 2018 admin	Comment(0)
२८ फागुन, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा एउटा मात्रै धावनमार्ग (रनवे) छ । सो रनवेका दुईवटा ‘हेडिङ’ अर्थात मुखहरु छन् । संसारभरिका जुनसुकै एयरपोर्टमा पनि एउटा रनवेका दुईवटा ‘हेडिङ’ हुन्छन् । र, दुबै हेडिङबाट विमान उडान वा अवतरण गर्न सकिन्छ । यसअर्थमा नेपालको विमानस्थलमा पनि दुबैतिरबाट अवतरण गर्न पाइन्छ, एउटा मात्रै मुखबाट अवतरण हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको ०२ रनवे हेडिङ कोटेश्वरतर्फको भागमा पर्छ । यसको विपरीत रनवे २० को हेडिङ चाहिँ पशुपति क्षेत्रतर्फ पर्छ । २० हेडिङबाट विमान अवतरण गर्नका लागि उत्तरतर्फ पशुपति क्षेत्रतर्फबाट आउनुपर्ने हुन्छ भने ०२ हेडिङबाट अवतरण गर्दा ललितपुरतिरबाट उपत्यका छिरेको विमान कतै नघुमी सोझै विमानस्थलमा प्रवेश गर्न सक्छ ।
बारा हुँदै ललितपुरतिरबाट उपत्यका छिर्ने अन्तरराष्ट्रिय एयरलाइन्सका विमानहरु प्रायः कोटेश्वरतर्फको ०२ हेडिङबाटै रनवे मा ओर्लिन्छन् र जमिनमा दौडन्छन् । २० बाट आउने विमानहरु उत्तरतर्फको हेडिङबाट रनवेमा दौडन्छन् ।
एयर ट्राफिक कन्ट्रोल रुमसँगको सहमति लिएर कोटेश्वरतर्फको विकल्पमा पशुपति क्षेत्रतर्फको २० हेडिङबाट पनि विमान अवतरण गरिनुलाई अवैधानिक मानिँदैन ।
विदेशबाट आउने जहाजहरु प्रायः कोटेश्वरतिरको ०२ हेडिङबाटै अवतरण हुनुका पछाडि दुईवटा कारण छन् । पहिलो, विमानले घुमिरहनुपर्दैन । र, दोस्रो ०२ हेडिङ रातिका लागि पनि सहज छ
तर, विदेशबाट आउने जहाजहरु प्रायः कोटेश्वरतिरको ०२ हेडिङबाटै अवतरण हुनुका पछाडि दुईवटा कारण छन् । पहिलो, विमानले घुमिरहनुपर्दैन । र, दोस्रो ०२ हेडिङ रातिका लागि पनि सहज छ । ’cause ०२ हेडिङका लागि ‘इन्टु्रमेन्ट एप्रोच’ जडान गरिएको छ । पशुपतिनाथतिरको २० हेडिङबाट अवतरण गर्दा भने त्यहाँ इन्ट्रुमेन्ट एप्रोच छैन ।
इन्ट्रुमेन्ट एप्रोच हुनुको फाइदा के हो भने रनवेमा बत्तीहरु पर्याप्त रुपमा जडान गरिएका हुन्छन् र राति पनि ल्याण्ड गर्नका लागि सजिलो हुन्छ । अन्यथा, रनवेको जुन मुखबाट अवतरण गरे पनि त्यसलाई अवैधानिक अवतरण भन्न चाहिँ मिल्दैन । त्यसलाई पनि वैधानिक अवतरण नै मानिन्छ ।
युएस बंगला एयरको विमान राति अवतरण भएको नभई दिउँसै भएकाले यसमा ०२ वा २० जहाँबाट अवतरण भए पनि फरक नपर्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन् ।
आखिर कोटेश्वरतर्फबाट ओर्लनुपर्ने विमान किन त्यहाँबाट ओर्लिएन र पशुपति क्षेत्रतर्फ लाग्यो ? एयर ट्राफिक कन्ट्रोल रुमसँगको सम्वाद सुन्दा एयर ट्राफिक जामका कारण यस्तो समस्या आएको हो । त्रिभुवन विमानस्थलमा बारम्बार एयर ट्राफिक जामको समस्या हुने गरेको छ । हामीसँग एउटा मात्रै अन्तरराष्ट्रिय एयरपोर्ट हुनुको पीडा नै यही हो ।
‘०२ को साटो २० रनवे प्रयोग गर्नु अवैधानिक होइन । तर, प्रश्न यो छ कि विमानले अवतरणका क्रममा रनवेको सेन्टर भाग किन समातेन र छेउतिर गएर नेपाल वायु सेवाको ह्याङगरमा झण्डै-झण्डै ठोक्किन पुग्यो ?’
युएस बंगला विमान’bout एकजना अनुभवी नेपाली पाइलट अनलाइनखबरसँग भन्छन्- ‘एयर ट्राफिक कन्ट्रोल रुम र चालकसँगको सम्वादमा चालकले ०२ बाट ट्राफिक जाम भएको अवस्थामा पशुपति क्षेत्रतर्फको रनवे २० हेडिङबाट अवतरण गर्न अनुमति मागेको सुनिन्छ । र, त्यहाँबाटै भए पनि अवतरण गर्न पाइने अनुमतिसमेत दिइएको समेत सुनिएको छ । त्यसरी अनुमति पाएको अवस्थामा ०२ वा २० जहाँबाट पनि अवतरण गर्दा पनि फरक पर्दैनथ्यो ।’
तर, ती पाइलटको प्रश्न छ – ‘०२ को साटो २० रनवे प्रयोग गर्नु अवैधानिक होइन । तर, प्रश्न यो छ कि विमानले अवतरणका क्रममा रनवेको सेन्टर भाग किन समातेन र छेउतिर गएर नेपाल वायु सेवाको ह्याङगरमा झण्डै-झण्डै ठोक्किन पुग्यो ?’
उनका अनुसार सो ह्याङगरमा विमान ठोक्किएको भए पार्किङमा रहेका विमानहरुमा ठूलोे क्षति पुग्ने थियो । ती विमान र फ्युलमा आगो लागेको भए त्रिभुवन विमानस्थलमा भयंकर क्षति हुने थियो ।
चालकहरु दुर्घटना परे पनि विमानभित्र रहँदा ती चालकले गरेको सम्वाद सीभीआर एवं ब्ल्याक बक्समा सुरक्षित छ । विमान जल्दा वा समुद्रमा डुब्दा पनि ब्ल्याक बक्सभित्रको आवाज सुरक्षित नै रहने गर्छ
दुर्घटनापछि सार्वजनिक भएको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल रुप र विमान चालकवीचको सम्वादले रनवे ०२ र २० का ’boutमा केही खुलासा अवश्यै गरेको छ । तर, पशुपति क्षेत्रतर्फको २० हेडिङ प्रयोग गर्न दिइएको निर्देशनअनुसारै सही, बंगला विमान किन सकुशल अवतरण हुन सकेन ? यसका लागिचाहिँ सो विमानभित्रै रहेका चालकवीच आपसमा भएको सम्वाद नै सुन्नुपर्ने हुन्छ ।
चालकहरु दुर्घटना परे पनि विमानभित्र रहँदा ती चालकले गरेको सम्वाद सीभीआर एवं ब्ल्याक बक्समा सुरक्षित छ । विमान जल्दा वा समुद्रमा डुब्दा पनि ब्ल्याक बक्सभित्रको आवाज सुरक्षित नै रहने गर्छ ।
शायद त्यहाँ रहेको चालकको सम्वाद सुनिसकेपछि अब पत्ता लाग्ने छ कि रनवे २० बाट अवतरण गर्न लाग्दा के समस्या पर्‍यो र युएस बंगला विमानले रनवेको सेन्टर भाग समात्न सकेन बिमानस्थलमा थेच्चारिन पुग्यो र ह्वारह्वारी जल्यो ?
यी हुन काठमाडौंका ११ सरकारी स्कुल, जहाँ प्राइभेटमा भन्दा राम्रो पढाई हुन्छ!!
अप्रील 3, 2018 अप्रील 12, 2018 admin
काठमाडौँ । हामी सरकारी स्कुल भन्नासाथ नाक खुम्च्याउछौ । अधिकांश हेर्दा त्यस्तैपनि छन् । निजी विद्यालयको हालिमुहाली रहेको काठमाडौँमा केही सामुदायिक विद्यालय पनि निजीकै हाराहारीमा उत्कृष्ट नतिजा दिन सफल रहेका छन्। सख्यात्मक हिसाबले एक हजार दुई सय निजी विद्यालय रहेको काठमाडौँमा दुई सय ८५ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। दुई सय ८५ मा पनि केही विद्यालयमात्र निजीसँग […]
आफैंले गोली हान्न लगाएको खुलासापछि आचार्य श्रीनिवास पक्राउ
मे 8, 2018 admin
हिन्दू धर्मगुरु आचार्य श्रीनिवास पक्राउ परेका छन्। आफूले आफैंलाई गोली हान्न लगाएको अभियोगमा मोरङ प्रहरीको टोलीले श्रीनिवासलाई सोमबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको हो। धर्मगुरू श्रीनिवास आफैंले गोली हान्न लगाएको खुलेपछि पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डिएसपी निशान्त थापाले सेतोपाटीलाई बताए। आचार्यमाथि चैत २५ गते मोरङको रानी जतुवामा रहेको जानकी मन्दिरमा सप्ताह लगाउन पुगेका श्रीनिवासमाथि गोली […]
‘जनता नकराएसम्म नहुने रहेछ’
मार्च 27, 2018 मार्च 27, 2018 admin
खुमलटारका स्थानीय अचेल औधी खुसी छन्। खुसी हुन उनीहरूलाई कसैले केही ठूलै कुरा दिएको होइन। आँगनअगाडिको बाटो धुलो नउड्ने भयो भनेर उनीहरूको खुसी बढेको हो। सम्बन्धित निकायले खनेपछि कालोपत्रे गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्दा ४ वर्षदेखि उनीहरूले धेरै कष्ट व्यहोरे। लामो संघर्ष गरे। कहिले डेलिगेसन गए त कहिले बाटै बन्द गरिदिए। म‌ंगलबार बिहान हामी पुग्दा सडकमा केही […]
प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई तिहाइ विश्वासको मत : पक्षमा २०८ र विपक्षमा ६० –
विमान दुर्घटनामा ४९ को मृत्यु, २२ घाइते